Benin: laga bilaabo Kutonu ilaa Cotonou, qulqulo taariikhda dib u soo xasuusta xasuusta - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » International Benin: laga soo bilaabo Kutonu ilaa Cotonou, qoob ka ciyaara taariikhda dib u soo kabashada xasuusta - JeuneAfrique.com
Benin: laga soo bilaabo Kutonu ilaa Cotonou, qoob ka ciyaara taariikhda dib u soo kabashada xasuusta - JeuneAfrique.com
Kaararka boostada. © zinsou foundation
Muuqaalka muuqaalka illaa iyo Oktoobar, aasaaska Zinsou wuxuu ku martiqaaday Cotonos (re) in uu xasuusiyo xasuusta qayb ahaan in la tirtiro ereyga gumeysiga.
Cotonou kuma qanacsana magaciisa dahab caddaan ah oo dhex maraya xididadaheeda waxayna buuxineysaa jeebabkii dadka soo gudbiya. Kutonu waa "dhimashada dhimashada", luuqadda Faaruuska. Dhul-beereed dhulgariir ah, dhammaadkii dhammaadkii adduunka oo ka soo baxday si lama filaan ah magaaladii isweydaarsiga, cosmopolitan iyo isbeddel joogto ah. Laakiin magaalad aan lahayn taariikh, sidoo kale, mid leh H, oo deriskiisa Ouidah iyo Abomey waxay qorayeen boggaga qarniyo badan. Marka laga reebo sumcadani waa been, iyo bandhigga «Cotonou (s). Taariikhda magaalada "taariikh aan lahayn" », in la helo ilaa laga gaaro Oktoobar gudaheeda Zinsou Foundation, waxay keentaa diidmo been abuur ah.
On screen weyn, khariidad cad oo marti soo booqda si ay u raacaan, tallaabo tallaabo, ballaarinta magaalada ka bilowgii qarnigii 17aad ilaa maanta. Kobaca ku dhowaad kobcida organic. Khariidadihii ugu horreeyay, oo aan hagaagsanayn, ayaa ah shaqaale ka shaqeeya Yurubiyaanka, ka dibna xayawaanka xeebta si ay u goostaan ​​goosashada dadka. Cotonou meel qallafsan, Cotonou wuxuu hoos udhigaa tuulooyin kala duduwan, waxaa ku dhexjiray xwlas, toffinus ama sintertos kuwaas oo heley magangalyo halkaas. horudhaca dagaalyahanada boqortooyada Abomey.
Hadda waxaad ku xiran tahay xisaabtaada Jeune Afrique, laakiin laguma qorin joornaalka Afrique Digital
Maqaalkani waa macaamiisha kaliya
Ka dalbo 7,99 €si aad u hesho dhammaan walxaha aan xadidneyn
Horeba macaamiishu? Log in >
U baahan caawinaad
1. Helitaanka unlimited dhan articles on goobta iyo codsiga Jeuneafrique.com (iOs & Android)
2. Raadi horudhac, saacadaha 24 ka hor intaan la daabicin, arrin kasta oo ka baxsan taxane ah Jeune Afrique barnaamijka Jeune Afrique Magazine (IWM & Android)
3. Hel wargeyska kaydka maalinlaha ee macaamiisha
4. Ku riyaaqa sanadihii 2 ee Diiwaanka Dhallinyarada Afrika ee daabacaadda
5. Diiwaangelinta adigoon kugula soconin muddada aad bixineyso bilaashka dib loo cusbooneysiin karo*
*Adeegga oo keliya ayaa loo helayaa liisaska dhameystiran.
Masar iyo Sacuudi Carabiya Labo Is-xeelo Is-dhex-galka ah oo lagu Sameeyo Xalka Solutions
Baro sida jiilka mustaqbalka ay u guuleysan doonaan - CAMEROON MAGAZINE
Netflix waxay saxiixday heshiis lagu qiimeeyo 60 Milyan doolarka Mareykanka iyadoo Beyonce: kala duwan - VIDEO
Cameroon - Easter / MGR Jean Mbarga (Archbishop of Yaounde): "Dhammaanteen waxaa lagu qabtey nawaaxiga qowmiyadda qowmiyadeed"
England: Chelsea ayaa seegi doonta fursada ay ugu soo bixi laheyd booska Podium
DADKA & LIFESTYLE3,127
DIB U EEGID2
Video dheeraad ah659